PSG အသင်းအတွက်ကစားသမားဘရက်ဂ်တိုက်စစ်မှူးဒဏ်ရိုက်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ PSG အသင်းအတွက် Brugge Attack ဒဏ်ငွေနှင့်စွန့်ခွာခြင်း
PSG အသင်းအတွက် Brugge Attack ဒဏ်ငွေနှင့်စွန့်ခွာခြင်း
ကလပ် Brugge တိုက်စစ်မှူး Mbaye Diagne သူဟာပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ 1-0 ရှုံးနိမ့်မှုမှာမပါ ၀ င်နိုင်တဲ့ပင်နယ်တီလွဲမှားပြီးဒဏ်ငွေချမှတ်ခံခဲ့ရသည် .
တိုက်ခိုက်သူသည်ကျူးလွန်မိသောအပြစ်၏သားကောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ထခဲ့သည် Thiago Silva ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, Parc des Princes မှာ 74th မိနစ်မှာ, နှင့်သတ်မှတ်ထားသောသေနတ်သမား၏အရပျ၌မိမိကိုမိမိကိုမိမိကိုအပ်ပေးတော်မူ၏ Hans Vanaken .
PSG ဂိုးသမားသည်အားနည်းသောအားထုတ်မှုကိုကယ်တင်ခဲ့သည် Keylor Navas ။ ၎င်းသည်သူ၏အသင်းကိုအဖိုးတန်သောအချက်တစ်ချက်ကိုထိရောက်စွာကုန်ကျစေပြီး၊ အုပ်စု (A) ဂိမ်း (၄) ခုတွင်သူ့ကို (၂) မှတ်သာချန်ထားခဲ့သည်။
28 နှစ်သက်တမ်းရှိ Senegalese International ကို Antwerp ရှိတနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှဒဏ်ငွေနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည်။ နည်းပြ Philippe Clement ကသူသည် Diagne ကိုလာမည့်အနာဂတ်တွင်အသင်းအတွက်ကစားရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒါဟာမိုက်မဲတဲ့အမှားပဲ။ ရလဒ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အမှားတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအလွန်အမင်းဒေါသထွက်ကြသည်။ သောကြာနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
"ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ပြီးတော့လိုက်ဖက်တဲ့အခန်းထဲမှာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်။ Diagne ကသူအမှားလုပ်မိပြီးစကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ လာကြ၏။ သူ Galatasaray ထံမှချေးငှားသည်
"ကျွန်တော်တို့ကဒီကလပ်မှာစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်၏စံနှုန်းများနှင့်တန်ဖိုးများကိုလက်ခံပြီးနားလည်ကြောင်းပြသခြင်းသည်ယခုအခါ Diagne အပေါ်မူတည်နေသည်” ဟုနည်းပြကပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသည်လာမည့်သီတင်းပတ်များအတွင်းသူပြသမည့်အရာပေါ်မူတည်သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအနာဂတ်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ "
"သူကတာ ၀ န်ယူတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးလို့တချို့အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်သူကဒိုင်ဂင်ကိုကန်တာမခံရန်ပြောခဲ့ပါတယ်" ဟုClémentကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒါပေမယ့်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူသတိထားမိလာရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအဆင့်မှာအငြင်းအခုံမပြုချင်ဘူး။ Hans သည်အခြေအနေကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/club-brugge/story/3984741/club-brugge-striker-mbaye-diagne-fineddropped-for-penalty-miss-vs-psg
US မှ Klinsmann အကြီးအကဲ Hertha ဘာလင်ဖျော်ဖြေပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
အိန္ဒိယ - အိုင်တီက ၀ င်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက်ရူပီးငွေ 435 ကုcroေရဲ့မထင်ရှားသော ၀ င်ငွေကို IT ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် အိန္ဒိယသတင်း